Buug Cusub: Baal-taariikheedkii iyo Suugaantii Af-qallooc | Somaliland.Org
Buug Cusub: Baal-taariikheedkii iyo Suugaantii Af-qallooc
July 28, 2008	Buug Cusub: Baal-taariikheedkii iyo Suugaantii Af-qallooc
Saddex marxaladood oo xidhiidhsanaa oo dalka iyo dadkuba soo mareen ayay gabayada Xaaji Aadan Af-qallooc si sokeeyennimo ah u gorfaynayaan, waxanu Xaajigu ahaa hal-abuur si qotodheer ugu fiirsada oo dhug u yeesha dhacdooyinka ka ilmo roganaya halku uu ku nool yahay. Waxa uu ahaa goobjooge si wanaagsan u falanqeeya oo gabay ku faalleeya wixii maanta dhacayey ee uu arkayey, isaga oo ku lifaaqaya dhacdooyin ka horreeyey oo xidhiidh la wadaagaya tan uu maanta faaqidaaddeeda soo bandhigayo. Waxa uu awood u lahaa inuu si sahlan gabay ugu soo gudbiyo fikraddiisa ku saabsan muuqaalka kasta oo nolosha ka mid ah, isaga oo u il furnaa caalamka kale iyo waxa ka dhacayaa xidhiidhka ay dadkiisa iyo dalkiisa la leeyihiin iyo saamayntooda shar iyo khayrba. Saddexda marxaladoodba arriintaas si mug leh ayaad uga dhex dhadhaminaysaa gabayadiisa. Saddexdaas marxaladood waxa ay kala ahaayeen:
b. Sannadihii 1940-naadkii iyo wixii ka horreeyey 1960. Waa xilliyadii uu socdey halgankii gobannimo-doonka ee gumeysiga lagu kicinayey. Xaajiga gabayadiisa iyo hadafkiisuba gobannimo u dirir aan gorgortan gelin buu ahaa. Dadka waxa uu hogatusaaleyn jirey qiimaha xornimada iyo waajibaadyada aan la gefi karin in loo maro xaqiijinteeda. Tusaale:
Sarakaca kufrigu waa sasabo suu na leeyahaye.
Mar haddaan waxaan doonayiyo dawladnimo waayey
Dantay weeye inaan aammusaa eegga dabadeede
Dilkii Sheekh Bashiir, 1947
Gobannimo Halkay Taal, 1958
t. Marxaladda labaadna waxa ay ahayd sagaalkii sannadood ee gobanimada ka dambeeyey (1960 – 1969). Xilligaasi waxa waddanka taladiisa u kala dambeeyey dawlado taag daran oo rayad lagu tilmaami jirey. Waxanay caan ku ahaayeen ku dhaqanka qabyaaladda iyo caadaysiga musuqmaasuqa. Xumaan badan oo madaxdii dawladdu horseed ka ahayd, ayuu Xaaji Aadan marxaladdanna dadka u soo bandhigayaa.
Murtida iyo aqoontiyo cilmigu malaha miisaane
Hadduu sida muwaashiga ciyuu muudal yahay soocan
Nin adduunyo maantaa hayaa mawlihii noqoye
Mugdi baynu soconnaa habeen meelaan nuur jirine
Sidii Binu Israa’iil mutaan marar sallownaaye
Isku murugney aakhirana waa madhax xunoo yaalle
Maxaan idinku maaweeliyaa miridhay laabtiiye.
Kuwa fuudka laaciyo intuu faajir talinaayo
Oo camalku kii Fiishar yahay faracna dheeraaday
Oo aanan filahayn inuu furuqu baan yeesho
Jeeruu fadliga Eebbahay ferej inoo keeno
Oo shicibka reer hebel fasaqay foodhibahalleeyo
Oo ay fariiddo u kacaan fidhadan ceebawdey
Faallada wixii dhacay inaan fidiyo waa caare
Waxba yaan ku foofine arrini hay fadhido caawa.
Facaan Ahay, 1962
Tembi baad u dhiibteen nimaan tuna ka sheegayne
Tabaalaha Wakhtiga, 1966
Akhlaaqdii xumaatoo xishood laga awaareeye
Iimaanku laabtuu jiraye aragahaw u guurye
Kun jeerood ixsaan fari ma jiro axad maqlaayaaye
Waxay dheguhu aad ugu furmaan ereyga ceebeede
Ina Cigaal, 1967
j. Marxaladda saddexaadna waxa ay ku beegmaysaa xilligii kacaannimada ee askartu ay dalka maamulayeen. Sidii dadka Soomaalida intooda ugu badani u taageereen inqilaabkii ciidamadu hormuudka ka ahaayeen, ayuu Xaaji Aadan Af-qalloocna u soo dhoweeyey is-beddelkaas.
Arday kama hadhoo macallinkuu daba ordaayaaye
Mas’uuliyaddu waa adagtahoo waa ammuur culuse
Ardal iyo nimaan qaadi karin looma aammino’e
Nin naftiisa amarkeed gabaa ma abyo khayrkeede
Waxaan ahay qabiilkii akhiray Reer Afriiqiya’e
Dabkaan ololiyaa lagu gubtaa meel haddaan imiye
Iimaan la’aantiyo dhibtaan abid jeclaadaaye
Awood waxaan u leeyahay khilaaf inan abuuraaye
Isku diridda iyo baan aqaan laydinka adkaaye
Qabyaaladdii oo Hadlaysa, 1971
Maantuu bilow yahay codkeennu oo laysku maamulo’e
Ka macaan maggaabada listiyo malabka Daaloode
Maskaxdii jirroon dayaxu waw madow yahay
Inyar oo qalbiga maal ku leh baa ka murugoone
Ku mintida afkii hooyo waa lagama maarmaane.
Afka Hooyo, 1972
Inkastaad haleelada adduun jaad kastaba hayso
Waa hoodo yay kaala dhicin jar iyo haadaane
Hodankii ahaa shalayto baan maanta qado hayne
Hoos labadii gelin weeye oo hawli dheer tahaye
Dhaaxay habaas kaga tagtaa nimay heshiiyeene
Nin Hawoodey, 1978
Saddexdaas marxaladood ee aynu wax ka soo xusnay gabay kastaa waxa uu muraayad u yahay oo laga dhex halacsanayaa waayihii iyo duruufihii jirey ee dalka iyo dadku ku sugnaayeen. Gabayada Af-qallooc marka aad la kulanto waxa aad dareemaysaa in ay lafta iyo dhuuxa ka nool yihiin oo ku dherersamayaan waayahan haddeerto la joogo. Waxa aad is moodsiinaysaa inuu haddeerto gabayada tirinayo, kana hadlayo nolosha maanta iyo daruufaha jira Soomaalida dhexdeeda iyo caalamkaba guud ahaan. Buuggani waxa uu haddaba si mug iyo miisaan leh isu dul taagayaa saddexdaas marxaladood iyo gabayadii ka dhashay ee Xaajiga Aadan Af-qallooc, waxaanu dhinaca kale soo bandhigayaa taariikh nololeedkii Xaajiga, barbaaritaankiisii, hanaqaadkiisii iyo inta jeer ee Alle saymo iyo sursuur oodan ka samata-bixiyey, noloshiisii qurbaha iyo inta uu badweyn iyo xuduudo u kala gooshay iyo halgankiisii gobannimo-doonka ahaa dibadda iyo markii dambe ee waddanka uu ku soo laabtayba. Waa taariikh hodan ah oo dhawr jiil iyo dhaqammo kala duwan aqoontood iyo waaya-aragnimadood minjaheedu ka soo jeedaan oo madaxa ku haysa. In ku dhow lixdan gabay, mid la soo wada helay iyo mid tuducyo laga hayaba, ayuu buuggu weelaynayaa. Waa suugaan la yaab leh oo aan ku ekayn xilligaas uu Xaajigu tirinayey duuruufihii jirey. Waxa ay la jaanqaadaysa wacaasha iyo waayaha bulsheed ee Soomaalida maanta, waana muraayad dib looga daawan karo tagtadeennii shalayto, laguna qiimayn karo joogtadeenna maanta, lagana sii hilaadin karo timaaddadeenna berrito soo foolka leh.
Wax na diley dunuub aanad gelin aanadeed bixiye
Wax na diley anaanayida iyo abiyo laan sheege……….
Ammaanaa yaraatoo dadkii ways ogaal dhacaye
Nin waliba halkii lagu ogaa gurey intii tiille
Ashahaado beeniyo ribey ku istareexeene
Acmaal lama rabee hadal-tiray ku ibtiloobeene…….
Ilaah lagama baqo shilinka oo la arko mooyaane
Axad gaabsha lama caawiniyo kii itaal darane
Nin adduun hayaa kii kaluu alamsanaayaaye
Waa lays inkirayaa sidii maalintii Urure………
Eexdiyo rishwadu waxay dhalaan uur-xumiyo ciile
Aanadu cadliga laga tegay aabbaheed tahaye
Aargoosigiisiyo dulmigu waa isu adeere
Marka xaqa la awdaa tolnimo loo abtiriyaaye……..
Ka sii daran:
Caammiye nin daadihinayuu diidayaan ahaye
Dab baan moodey gaaraabidhaan daymadii hore’e
Dambas iyo ramaad baariddaan naar ka deyayaaye
Dacar iyo unuun baan macaan ugu dudaayaaye
Doofaar ilkihii baan u filay dur iyo yaaquude………..
Bahal cadarku dilayaa jira oo digo shifaysaaye
Idinkana daliilkiyo wacdigu waydin didiyaane
Af-daleela iyo baad shubtaan Diin la iibsado’e………
Dunjigi Aadan ubadkuu dhalaad ugu dambaysaane
Wixii aad ku dacafteen qalbigu saw iskama daayo
Maruun maad ku dayataan khalqiga libinta doonaaya!!